Vaovao - Toeram-panofanana momba ny fitantanana
Oxygène volontany aluminium
Toeram-panofanana momba ny fitantanana
Mba hanatsarana ny fahaiza-mitantana sy ny haavon'ny mpiasa mpitantana ny orinasa, hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny kalitao, ny lanonam-panokafana ny fahaizan'ny Kadre fitantanana fahaiza-mitantana toby sy ny fiofanana voalohany ao amin'ny Oniversiten'i Shandong momba ny Teknolojia The Center of Exchange Academic dia notontosaina tamin'ny 28 Aogositra hatramin'ny faha-29, efa ho 70 mpitantana antonony sy avo lenta an'ny orinasa vondrona no nandray anjara tamin'izany.
Mandritra ny efa-bolana ny toby fitobiana. Miantehitra amin'ny sampam-pianarana avo lenta ao amin'ny oniversite Taishan Management, izy io dia manakarama mpampianatra mpikotrana fanta-daza hanome lahateny, ary manaraka ny fiofanana momba ny "fiofanana ho an'ny anatiny sy ivelany, ny fampidirana saina sy fahaiza-manao" ho fampandrosoana ny fitantanana kadre fahaiza-manao, mikendry ny hanampy ny cadre fitantanana hanatsara ny fahaiza-mitantana sy fitantanana ekipa haingana.
Taorinan'ny lanonam-panokafana, ilay profesora nalaza tamin'ny Taishan Management College dia nitondra fiofanana roa andro voalohany momba ny "Ny fahazarana 7 an'ny olona mahomby be".
Ny fiofanana dia atao anaty vondrona. Mampiasa fomba fampianarana toa ny lahateny, fifanakalozan-kevitra ary famakafakana tranga ity mpampianatra ity mba hanehoana amin'ny fomba rafi-pitantanana ny fahalalana ao anaty fahazarana, fanatanterahana asa, fambolena ary fitarihana ny olona ambany, fifandraisana mahomby ary fanentanana an'ireo mpiofana mandritra ny roa andro fiofanana. Ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny cadre fitantanana toy ny mpiasa. Teo ambany fitarihan'ny mpampianatra dia nandray anjara mavitrika ireo mpiofana, nampiasa ny fahalalana nianarany ary niteny tamim-pahazotoana, namorona rivo-piainana mianatra eo an-toerana.
Ny fiofanana no tombony tsara indrindra ho an'ny mpiasa. TAA dia nanolo-tena tamin'ny fananganana orinasam-pianarana. Tao anatin'izay taona faramparany izay, niaraka tamin'ny fivoarana haingana, dia napetraka ny fepetra ambony kokoa amin'ny fananganana ny mpiasa. Ny TAA dia namintina ny traikefa, manavao ary manova ny fomba fiofanana, ny maodely fiofanana ary ny haavon'ny fiofanana. Mampiasa hevi-baovao, hevi-baovao ary maodely vaovao hitarihana ny fitomboan'ny mpiasa tsy tapaka, ary hanova ny zava-bitan'ny mpiasa ho lasa matanjaka hampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny orinasa.
Fotoana fandefasana: Nov-05-2020